စွန်နီ မောင်လာနာ ပြောပြသည့် မောင်လာအလီ (အ.စ) အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
News Code : 762959
Source : Saunglwin Aung ၏ fb စာမျက်နှာ
ဆိုတဲ့ အာယတ်တော် 42: 23ကျရောက်လာတော့ သာဝကတော်များက အိုးကိုယ်တော်- (ဤအာယတ်တော်အရ) ချစ်ကြည်မြတ်နိုးသမှုရှိကြရန် ကွန်ုပ်တို့အပေါ်၌ တာဝန်တရပ်အဖြစ် ပြဌာန်းခြင်းခံရသည့် ကိုယ်တော်၏ ဆွေတော်မျိုးတော် ပုဂ္ဂိုလ်မွန်များကား မည်သူတို့ ဖြစ်ကြပါသနည်းဟု မေးမြန်းလျှောက်ထားကြရာ ကိုယ်တော်က အလီ၊ ဖွာတွေမာနှင့် သူတို့၏ သားတော်နှစ်ပါးဟု ဖြေဆိုတော်မူ၏။ (မွတ်စ်နဒ် အဟ်မဒ် 1141 တွဗရာနီ 2641,12259)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اﷲ عنهما قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ: ﴿قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اﷲِ، مَنْ قَرَابَتُکَ هٰؤُلَائِ الَّذِيْنَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ؟ قَالَ: عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَابْنَاهُمَا. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَحْمَدُ.
أخرجه وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة،2/ 669، الرقم: 1141،
الطبراني في المعجم الکبير،3/ 47، الرقم: 2641، وأيضًا، 11 / 444، الرقم: 12259
အာယတ်(2) အဟ်လေ့ အာဘာအ်
إِنَّمَا يُرِيْدُ اﷲُ لِيُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَکُمْ تَطْهِيْرًا
احزاب : 33
ကုရ်အာန် 33:33 အာယတ်ကျရောက်လာသောအခါ ကိုယ်တော်သည် ဖွာတွေမာသခင်မ၊ ဟဆန်သခင် နှင့် ဟိုစိုင်န်သခင်တို့ကိုခေါ်ယူတော်မူပြီး မိမိ၏ ခြုံထည်အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းမူသည်။ အလီသခင်အားလည်း မိမိ၏ နောက်ကြောဘက်မှ ခြုံထည်အတွင်း ဆွဲသွင်းတော်မူပြီး အိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်။ ဤသည်တို့မှာ ကျွန်တော်မျိုး၏ အဟ်လေ့ဘိုင်းသ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ (အရှင်မြတ်၏ ကုရ်အာန်အာယတ်တော်မှာ မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း) ၄င်းတို့ထံမှ အညစ်အကြေးများကိုသန့်စင်စေ၍ ၄င်းတို့အား အလွန့်အလွန်သန့်ရှင်း စင်ကြယ်မှုပြုပေးတော်မူပါဟု ဒိုအာပြုတော်မူ၏။ အွမ်းမေ့စလ်မာသခင်မ၏ အိမ်ဂေဟာတွင် ထိုသို့ပြုတော်မူခြင်း ဖြစ်၏။
(သိရ်မိဇီ 3205; 3787)
عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَبِيْبِ النَّبِيِّ صلی الله عليه وآله وسلم ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ عَلَي النَّبِيِّ صلی الله عليه وآله وسلم : ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ اﷲُ لِيُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَکُمْ تَطْهِيْرًا﴾ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا رضی الله عنهم فَجَلَّلَهُمْ بِکِسَائٍ، وَعَلِيٌّ رضی الله عنه خَلْفَ ظَهرِه فَجَلَّلَه بِکِسَائٍ، ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ، هٰؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِرْهُمْ تَطْهِيْرًا.
أخرجه الترمذي في السنن، کتاب التفسير، باب ومن سورة الأحزاب،5/ 351، الرقم: 3205، وأيضًا في کتاب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي صلی الله عليه وآله وسلم ،5/ 663، الرقم: 3787،
ဒီသဘောတရားအတိုင်း အာအေရှာသခင်မကလည်း ဆင့်ပြန်ထားပါသေးတယ်။ မွတ်စလင်ကျမ်း2424 နဲ့ မွတ်စနဒ်အဟ်မဒ်ကျမ်း 1149 က ဖော်ပြပါတယ်။
عَنْ عَائِشَةَ رضي اﷲ عنها قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلی الله عليه وآله وسلم غَدَاة وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ، مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ. فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضي اﷲ عنهما فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ رضی الله عنه فَدَخَلَ مَعَه، ثُمَّ جَاءَ تْ فَاطِمَةُ رضي اﷲ عنها فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ رضی الله عنه فَأَدْخَلَه، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ اﷲُ لِيُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَکُمْ تَطْهِيْرًا﴾.
أخرجه مسلم في الصحيح، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيت النبي صلی الله عليه وآله وسلم ،4/ 1883، الرقم: 2424، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة،2/ 672،
နဂ်ျရန်ဒေသက နစွရာနီတို့ မဒီနာရောက်လာပြီး ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ မုဘာဟာလာပြုလုပ်ရန် စိမ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့သားသမီးများ အမျိုးသမီးများကို ကွင်းပြင်ကို ခေါ်ယူပြီး ကျိန်တွယ်ကြရန် အမိန့်တော် (ကုရ်အာန်3:36 )ကျရောက်လာတော့ ကိုယ်တော်က အလီသခင်၊ ဖွာတွေမာသခင်မ၊ ဟဆန်သခင်နှင့် ဟိုစိုင်န်သခင်တို့အား ခေါ်ယူသွားပြီး အိုး အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်။ ဤသည်တို့မှာ ကျွန်တော်မျိုး၏ အဟ်လေ့ဘိုင်းသ် (အိမ်တော်သူအိမ်တော်သား)များပါ ဟု ဆုတောင်းရာတွင် ထည့်သွင်းမိန့်ဆိုတော်မူ၏။ (မွတ်စလင် 2404 သိစ်မိဇီ 3724)
هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوْ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَ کُمْ﴾ [آل عمران،3: 61]، دَعَا رَسُوْلُ اﷲِ صلی الله عليه وآله وسلم عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ، هٰؤُلَآءِ أًهْلِي.
ဟဒီးသ်တော်(1) ပထမဆုံး အီမာန်ယူသူ
ပထမဆုံး အီမာန်ရှင်ဟာ ခဒီဂျာသခင်မကြီးပါ။ အမျိုးသားများထဲမှာ ပထမဆုံး အီမာန်ရှင်ကတော့ အလီသခင်ပါ။ အဘူဘကရ်သခင်ဆိုတဲ့ ဟဒီးဆ်လည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလီသခင်ဟာ ပုခက်တွင်းမှသည် ကြီးပြင်းသည်အထိ ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင် ထိန်းမပေးခြင်းခံရသူ ကိုယ်တော့်အိမ်တော်တွင်းကမို့ အလီသခင်ပါဆိုတာက ပိုမိုသဘာဝကျပါတယ်။ တတိယကတော့ ကိုယ်တော်ရဲ့ မွေးစားသား ဇိုက်သခင်ပါ။ အမျိုးသားကြီးတွေထဲမှာသာ ပထမဆုံးက အဘူဘကရ်သခင်ဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
ဇိုက်ဒ်ဘင်အရ်ကမ်သခင်က ပြောပြသည်။ (အမျိုးသား တို့အနက်) ပထမဆုံး အီမာန်ယူသူမှာ အလီသခင်ဖြစ်သည်။ (သိရ်မိဇီ 3735 နစာအီ 8137 မွတ်စ်နဒ် အဟ်မဒ်4/ 367 )
عن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضی الله عنه يَقُوْلُ:
أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَقَالَ الْحَاکِمُ: هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.
أخرجه الترمذي في السنن، کتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضی الله عنه،5/ 642، الرقم: 3735، والنسائي في السنن الکبری،5/ 43، الرقم: 8137، وأحمد بن حنبل في المسند،4/ 367،
ဟဒီးဆ်(2) ပထမဆုံး နမာဇီ
ကိုယ်တော်မြတ်သည် တနင်းလာနေ့တွင် နဘူဝသ်ကို အသိပေးတော်မူခဲ့ပြီး အင်္ဂါနေ့တွင် အလီသခင်သည် (ကိုယ်တော်နှင့်အတူ) ဆွလာတ်ဝတ်ခဲ့သည်။ (သိရ်မိဇီ 3728)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ رضی الله عنه قَالَ: بُعِثَ النَّبِيُّ صلی الله عليه وآله وسلم يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَصَلّٰي عَلِيٌّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ.
أخرجه الترمذي في السنن، کتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضی الله عنه،5/ 640، الرقم: 3728، والحاکم في المستدرک،3/ 121، الرقم: 4587،
ဟဒီးဆ်(3)အလီကိုချစ်ခြင်းသည် အီမာန်၏ လက္ခဏာ
(အို အလီ) အီမာန်ရှင်မှန်လျှင် အသင့်အား ချစ်ခင်ကြလိမ့်မည်။ မုနာဖစ်ကသာလျှင် အသင့်အား မုန်းလိမ့်မည် ဟု မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိန့်တော်မူ၏။ (သိရ်မိဇီ 3736 မွတ်စလင် 78 နစာအီ 8153)
عَنْ عَلِيٍّ رضی الله عنه قَالَ: لَقَدْ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ صلی الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ لَا يُحِبُّکَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُکَ إِلاَّ مُنَافِقٌ.
وأخرجه مسلم في الصحيح، کتاب الإيمان، باب الدليل علي أن حب الأنصار وعلي من الإيمان وعلاماته، 1 / 86، الرقم: 78، والنسائي في السنن الکبری،5/ 47، الرقم: 8153
ဟဒီးစ်(4) အလီသည် မောင်လာ
ငါတမန်တော်၏ ဝေလာယတ် (အုပ်ထိန်းမှု)ကို လက်ခံသူမည်သူမဆို အလီ၏ ဝေလာယတ်ကိုလည်း လက်ခံကြလော့ဟု မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မိန့်မှာတော်မူ၏။ (သိရ်မိဇီ 3713)
عَنِ النَّبِيِّ صلی الله عليه وآله وسلم ، قَالَ: مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ.
وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ
أخرجه الترمذي في السنن، کتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضی الله عنه،5/ 633، الرقم: 3713
ဟဒီးစ်(5) ငါ၏နောက်တွင် အလီသည် ဝလီ
အလီသည် ငါမှဖြစ်ပြီး ငါသည်လည်း အလီမှဖြစ်သည်။(ဆိုလိုသည်မှာ-ငါနှင့်အလီသည် တသွေးတည်း တသားတည်း ဖြစ်သည်) ငါမရှိတော့ပြီးနောက်တွင် အလီသည် အီမာန်ရှင်အားလုံး၏ ဝလီ(အုပ်ထိန်းသူ) ဖြစ်သည်။( သိရ်မိဇီ 3712 နစာအီ 8474 မွတ်စ်နဒ် အဟ်မဒ် 3062)
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، في رواية طويلة: إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ کُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي.
وَقَالَ التِّرْمِذِي: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَقَالَ الْحَاکِمُ: هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلٰی شَرْطِ مُسْلِمٍ.
أخرجه الترمذي في السنن، کتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضی الله عنه،5/ 632، الرقم: 3712، والنسائي في السنن الکبری،5/ 132، الرقم: 8474، وأحمد بن حنبل في المسند، 1 / 330، الرقم: 3062
'မောင်လာအလီသခင်ရဲ့ မဇာရ်တော်ပါ။ အီရတ်နိုင်ငံ နဂျဖ်မြို့မှာ တည်ရှိပါတယ်'
'သခင်ရဲ့ မဇာရ်တ်ေဟာ ဇေယာရတ်ပြုလုပ်သူများဖြင့် အလွန်စည်ကားနေမြဲ ဖြစ်ပါတယ်'
'သခင့်ရဲ့ ကဘရ် ရှိရာ အဆောင်တော်ပါ'
'ရွှေရောင် ကဘရ်အဆောင်တော်အတွင်းပိုင်း ကဘရ်ရှရီးဖ်ပါ'